Kungani iningi Lamadivayisi E-elekthronikhi Esebenzisa Ama-Jacks angama-3.5mm? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Kungani iningi Lamadivayisi E-elekhthronikhi Esebenzisa Ama-Jacks angama-3.5mm?
Isikhathi: 2020-07-16 Hits: 17
Izinkampani eziningi zinqume kanjani echwebeni efanayo lomsindo kumadivayisi abo? Ngabe la mazwe kanye nezinkampani anqume ngokungazelele ukuhlangana nomunye ngale ndaba eyodwa? Uyini imfihlo yokwamukelwa okubanzi kwe-jackmm ka-3.5?
Umsuka we-jackbu yomsindo engu-3.5 mm
Umsuka we-jackmm ka-3.5mm ungalandelelwa yonke indlela ubuyela ku-19th century. Back in 1878, a predecessor to the 3.5mm jack, a 6.35mm jack (also called the ¼” inch jack) was developed as a ‘phone connector’ used by telephone operators to direct calls manually. Back then, you couldn’t just dial a number and be connected straight away. You had to speak to an actual person (the operator) and request that they connect your call forward.
Ukuthandwa kwe-jack 3.5 mm
Abokuqala abangama-20th Ikhulu leminyaka labona ukufika nokwamukelwa kabanzi komsakazo. Umsakazo bekuyinto yokuqala lapho i-quarter-inch jack yathola ukusetshenziswa emculweni. Yonke imindeni yathuthelekela esitolo esiseduze se-elekhthronikhi ukuletha umshini wabo womculo ekhaya. Abantu abavela kuzo zonke izigaba zokuphila, kusukela ezindlini ezihlangene zeNew York baya ezindlini ezinkulu ezinamakhaya abo, babenomculo oqubuka emsakazweni, abanye baze bafika ezingxoxweni nabo!
Isidingo esibonakalayo somsakazo savunyelwa i-jack-intshi jack ukuthi ibe yinto entsha emkhakheni wokudlalwa komsindo. Noma kunjalo, kwakungekho kuze kube sekupheleni kweminyaka engama-20th ikhulu leminyaka lapho umphakathi wamukele i-jackmm yesimanje engu-3.5mm ngolwazi lwabo lokulalela umculo.
Ngo-1979, uSony wasungula i-Walkman, eyaguqula imboni yomculo ephathekayo. Kwakuyi-iPod ngaphambi kokuba i-iPod ibe khona. Ngenhloso yokwenza kube lula ukwedlula zonke, uSony wasebenzisa i-jackmm encane engu-3.5mm, eyaqala ukusetshenziswa kwi-transistor yomsakazo yenkampani yaseJapan. Wonke umuntu kusuka kubafundi basekolishi ukuya kwabathathe umhlalaphansi wayexhunywe ezindlebeni zeSony Walkman ezindlebeni zabo. Kwakuyisidingo lesi esiqhumayo se-Walkman esivumele ukuthandwa okukhulu kwe-3.5mm jack. Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe obusetshenziswe echwebeni engu-3.5mm emuva ngo-1979 buhleli bungashintshiwe kakhulu kuze kube namuhla.
Ngabe isebenza kanjani i-audio jack engu-3.5 mm?
I-jackmm engu-3.5mm esiyisebenzisa kabanzi namuhla ibizwa ngokuthi isixhumi se-TRS (Tip Ring Sleeve). Ithiphu, indandatho nomkhono kuyizingxenye ezintathu ezihlanganayo ze-jack. Lezi zibhalwe ngezansi:
Ithiphu idlulisa okwamanje kwesipikha / isipikha sesokunxele, indandatho idlulisela kwesipika / okokubeka endle kwesokunene, bese umkhono uzibeka ethekwini. Amabhendi amnyama phakathi awabizwa ngokuthi ama-grommets ahlukanisayo, aqinisekisa ukuthi akukho ukuhlanganiswa komsindo okungafuneki phakathi kweziteshi ezifanele nezesobunxele. Uma unaka, amanye ama-jacks angama-3.5mm anenombolo eyodwa yokuhlukanisa, amanye anezimbili, kanti amanye aze afike amathathu. Igrommet eyodwa yokuhlukanisa isho ukuthi isixhumi sifika nethiphu nje kanye nomkhono ngaphandle kwendandatho, okuholela ekuphumeni komsindo we-mono. Ukube ubunezindandatho ezikhala ngendandatho eyodwa, ubuzobe unomsindo ovela kolunye lwezinto ezisetshenziselwa izindlebe. Ama jacks one-grommet asetshenziselwa ikakhulukazi iziginci.
I-Xianglong 3.5mm i-audio hand handset
Okwedlule: Ukuqanjwa Kokubambelela Okuvumayo
Okulandelayo: Zisebenza Kanjani Izingcingo Ezisebenza Ngomsindo?